घर युरोपियन स्टार इस्को बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीजको मिडफील्ड जेनियस प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नाम उपनामको रूपमा चिनिन्छ; "जादू"। हाम्रो Isco बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणले आफ्नो प्रारम्भिक जीवन कथामा प्रसिद्धि, व्यक्तिगत जीवन, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र अरूको बारेमा अन्य साना तथ्यहरू भन्दा अघि समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कम्बोको जीवनीलाई धेरै रोचक लाग्छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
फ्रान्सिस्को रोमानान अलार्कन सुजर को सर्वश्रेष्ठ 'आइस्को' भनिन्छ जसको नाम मा 21st, स्पेन को बेनामलडे मा 1992 मा जन्म भएको थियो।
Spaniard उनको आमा, जेनी सुजरे (एक गृहिणी) र बुबा, पको अलार्कन (एक पूर्व होटल कर्मचारी र वर्तमान मा, उनको छोराको प्रबन्धक) मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो बुबा भाइ, एण्टोनियो कार्लोस अलार्कोनसँग बसीरहेका थिए।
अंग्रेजीको जस्तै जैक विल्लेरी, Isco पुष्प पैर भएको जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो बचपनको समयमा पनि थोरै थियो। यो थोरै वजनले कहिल्यै आफ्नो खुट्टा सीधा गर्न मद्दत गर्दैन। उनीहरूको बिरोध गर्न थाल्दा मात्र उनको धनुषाको कटोरा घुम्न थालेको थियो।
त्यसपछि बच्चाको रूपमा, इस्कोलाई उनको भौतिक अवस्थालाई फुटबल बनाउने बन्ने सपना सीमित गर्न कहिल्यै अनुमति दिइएको थिएन। उनले आफ्नो पहिलो युवा क्लबमा दर्ता गर्नु अघि आफ्नो ओभरटाइटनेसमाथि विजय हासिल गर्न आफ्नो बाटो लडे। फुटबलर हुन उत्प्रेरित आफ्नो बुबा भाइबाट आए जो चोटको कारण प्रारम्भिक उमेरमा आफ्नो फुटबल क्यारियर गुमाए।
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
Isco को कैरियर सारांश प्रमुख लेखन प्वाइन्ट्स मा ध्यान केंद्रित गर्दछ कि यो कसरी इकोको आधुनिक दिन फुटबल को सबै भन्दा महान मिडफील्डर्स मध्ये एक हुन को लागी सबै बाधाओं को बचाव गर्दछ।
1997 मा, इस्को आफैलाई आफ्नो आमाबाबुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएपछि पीडीएम बेनाललेडेनलाई युवा युवा क्लबमा दर्ता गरेको छ। यहाँ समर्थनमा Isco एक शैक्षिक पृष्ठभूमि छ। उहाँले उनीहरूको लागि खेल्नुभयो र त्यही समयमा अध्ययन गर्नुभयो।
खेल्दा, यो स्पष्ट भयो कि Isco को dribbling र चलिरहेको शैली कसैलाई भन्दा फरक छ। उनको कपाल-टाढाको स्वभाव जसको डरलाग्दो थियो उनीहरूले आफ्नो करियरको अभावमा उनीहरूको कौशलमा थप फाइदा उठाइदिए। वास्तवमा, उनीहरूको खुट्टाको आकार पनि फरक फरक भयो र तिनलाई राम्रो परिणामहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्यो। उनको प्रगतिको लागि धन्यबाद, अटलेटोको बेनिमीलले अर्को युवा क्लबलाई आफ्नो सेवा पाएका थिए।
1999 देखि 2006 सम्म एस्टोकोको बेनिमीएल मा Isco प्रगति चिकनी थियो। तथापि, त्यहाँ एक मुद्दा थियो कि ठूलो क्लबबाट उनलाई कल दिन डराउने डरलाग्दो स्काउट्स। एक नजिकको बचपन मित्र र इस्कोको एक प्रशंसकले एक पटक प्रकट गर्यो ...
"कहिलेकाहीँ म बच्चा थियो, म आफैले यसो भन्छु: 'यदि योको बनाउँदैन भने, हामी कहिल्यै कसैलाई थाहा छैनौँ' - मैले देखेकी योको विशेष थियो। हास्यास्पद कुरा थियो, त्यहाँ त्यहाँ स्काउटहरू लगातार उनीहरूलाई हेर्दै थिए तर कसैले उसलाई बोलाउन प्रयोग गरेनन, [मानिसहरू] ब्यान्डीको खुट्टाले यसको प्रयोग गर्न प्रयोग गरे, [वा] उनी धेरै ढिलो छन्। खैर, मलाई सोच्दैन कि उहाँले बुरी काम गर्नुभयो। "
यो होलिसिया थियो जसले बोयोड चरणमा Isco लाई साइन इन गर्यो। उनले वेल्सेशिया बी बनाउने 52 उपस्थितिका लागि खेलेका थिए र 16 बाट 2009 बाट 2011 लक्ष्यहरू गोल गर्दै। उनको वैलिसिया बी दिनको समयमा इस्कोको तातो केक बन्यो। यो जब उनी आफ्नो युवा क्यारियरको अन्तिम दिन देखे।
इनिको पेलेग्र्रिनिको मालागामा स्थानान्तरण स्वीकार गर्नु अघि इस्कोको वरिष्ठ टोलीको लागि4म्याचहरू मात्र खेले। क्लबले अधिग्रहण पछि एक बयान जारी गर्यो।
यदि उनको धनुषको खुट्टा सुरुमा तिनीहरु बजारमा थिएनन् भने, ... त्यसपछि, यो हुनु हुँदैन। जब Isco सडक तल हिंड्दा मलाई परवाह छैन, जब योको आफ्नो कुकुर संग हिंड्दा मलाई परवाह छैन; म केवल हेरचाह गर्छु त्यो कसरी खेल्छ, " वेलिएनियाबाट योस्कोका मलागामा हस्ताक्षर गरेको खेल निर्देशक एन्टोनियो फर्नाण्डेजले भने, जस्तै कि उसले 19 लाई फर्काइरहेको थियो।
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
इस्को मात्र उहाँका मा-फील्ड प्रविधिहरूको लागि चिनिन्छ, त्यो पनि एक उत्कृष्ट कलाकार बन्द क्षेत्र हो। उहाँ उहाँका लागि जान्नुहुन्छ सरल व्यक्तिगत जीवन जुन उसले एक पेशेवर कोणबाट प्रबन्ध गर्दछ।
जब उनी पहिलो पटक लाइटलाइटमा आइपुगिए, यसका धेरै प्रशंसकहरू इस्कोको प्रेम कथा वा वागको बारेमा सोध्छन्। पीइलोजर उत्सुक थिए कि यो एस्को प्रेमिका वा पत्नी थिए र कसरी उनीहरूको प्रेम जीवन जाँदै थिए।
तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि यो तथ्य लेख्नुहोस् कि यस टुक्रा लेख्दाको समयमा अस्को पनि अविवाहित छ। तिनी एक पटक विक्टोरिया क्याल्डरनसँग सम्बन्धमा थिए। तिनीहरूले प्रारम्भिक 2010 बाट एकअर्कालाई सुरू गर्न थाले।
Isco र सुंदर विक्टोरिया Calderón
तिनीहरू फ्रान्सिस्को अलारकोन क्याल्डरन नामक एक छोरा संग आशिष् थिए। उहाँ 2014 मा जन्मनुभएको थियो।
Isco को पारिवारिक फोटो
ट्राफिक क्षणहरू योस्को र तिनका छोराको लागि तल देखिनका लागि खुसी छन्।
Isco र Francisco को लागि ट्राभल पल
उहाँले फ्रान्सिस्कोका छोरालाई प्रशिक्षण दिन लिनुहुन्छ। Isco आशा छ कि उनको छोरा भविष्य मा उसलाई सफल हुन्छ।
फ्रान्सिस्कोले आफ्नो पिताको लागि एक दूरी बताउँछ
विक्टोरिया संग उनको सम्बन्ध पछि खडा भयो, Isco पेशे द्वारा एक मोडेल हो कारमेन Munoz को डेटिंग शुरू गर्यो।
जस्तो देखिन्छ कि 2016 बाट डेटिङ गर्ने जोडीको बीच कुनै पनि समस्याको कुनै संकेत छैन। हामी जान्दिन कि जोतेले उनीहरूको सम्बन्धको आनन्द उठाउँदै र एकअर्कालाई आफ्नो पेशामा समर्थन गर्दछ। यदि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भने, कारमेन मुनिजको भविष्यमा योस्कोको भविष्य पत्नी हुन सक्छ।
हालैमा, माथिको बिन्दु अचम्ममा राखिएको छ। योइसको रूपमा हालै एक नयाँ रहस्यमय केटीको साथ देखा पर्यो, जसले स्पेनी प्रेसमा भिजेका भाषाहरू पठाए।
इस्कोको नवीनतम संस्करण
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
आइस्कोको स्पेनी मध्य-कक्षा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। उनको पिता, पको अलारोक, उनको वर्तमान प्रबन्धक र प्रतिनिधि हो।
Isco र Paco Alarcon
मातृभाषा: Jenny Suárez is the mother of Isco. The housewife is known to have instilled the determination in her son which has helped him to fight and achieve his goals. जेनी उनको छोरालाई शिक्षण गर्न थाल्दा थियो basic values of humility.
Isco र आमा, जेनी सुरेज
भाइरस: इस्कोको एन्टोनियो कार्लोस अलारक नाउँको एक समान युवक छ। एन्टोनियोले फुटबल खेलेको तर उनको चोटको कारण उनले छोडेनन्। तल अलारकन भाइहरू सुन्दर र तातो हुन्।
Isco (बाँया), एन्टोनियो कार्लोस अलारकॉन (दाँया)
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -हानिको लागि विरोधाभास
अप्रिल 2017 मा, बार्सिलोनाले मलागा विरुद्ध 2-0 हराएको पश्चात एफसी बार्सिलोना खेलाडी पिकले ट्रक गरे। हानि पछि, उनले धेरै ट्वीट्सलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी टोली र खेलाडी खेलाडीलाई ट्वीटर गरे।
इस्कोको मात्र विवादास्पद पल
उनको कार्य को लागि, धेरै फुटबल प्रशंसकहरूले उनलाई नै राष्ट्रीय टीम को एक वरिष्ठ खेलाडी मजाक गर्न को आलोचना गरे।
Isco बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उपनाम तथ्य
तिनको जित्ताले मुर्खा पातहरूबाट हिंड्छ, बेन्डी पाकहरू, र बल नियन्त्रणको परिणामस्वरूप उसको उपनाममा। थियो Iker Casillas र सर्जियो रामोस जसले पहिले उहाँलाई भनिन् "मगिया"अर्थ 'जादू'। चाँडै, सबैजना मा रियल म्याड्रिड ड्रेसिंग रूम पछि।
नोभेम्बर 11, 2017